ဂုဏ်ဒြပ်အရာဝတ္တု စည်းစိမ်ဥစ္စာအာဏာအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလဲလိုက်ပြီဆိုရင် မင်းလူဖြစ်ရှူံးပြီသားရေလို့ သားရဲ့မွေးနေ့မှာ ဆုံးမစကားလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဇဏ်ခီ – XB Media & News
ဂုဏ်ဒြပ်အရာဝတ္တု စည်းစိမ်ဥစ္စာအာဏာအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလဲလိုက်ပြီဆိုရင် မင်းလူဖြစ်ရှူံးပြီသားရေလို့ သားရဲ့မွေးနေ့မှာ ဆုံးမစကားလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဇဏ်ခီ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် စုံတွဲလေးတစ်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် အနုပညာစုံတွဲလေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
မိသားစုဝင်တွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအလေးထားတဲ့ ဇဏ်ခီကတော့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သားလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက်ကိုလည်း မွေးနေ့ ဆု မွန် ကောင်းတွေအခုလိုပဲတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။”Happy 9th Birthday Noah! “ဘဝရဲ့လှည့်ကွက်တွေထဲ တချိန်ချိန်တော့ ပေး လျှောက် ရမှာပဲ။ ကိုယ်တွေ့မရှိရင်လောကဓံကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ခက်မယ်။
အမည်းစက်မစွန်းတဲ့လူမရှိဘူးသားရယ် အခြေအနေတွေ ဟာ ပြော င်းလဲနေပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ဘာကိုမှမလဲလိုက်ပါနဲ့..” ဂုဏ် ဒြပ် အရာဝတ္တု စည်းစိမ်ဥစ္စာ အာဏာအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကိုလဲလိုက်ပြီဆိုရင် မင်းလူဖြစ်ရှူံးပြီသားရေ “ဆိုပြီး သူရဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ထဲက စားသားလေးတွေနဲ့အတူ သားဖြစ်သူ ကို ဆုံးမစကား လေးပြောကာ မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးလည်း Noah လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဇစ်ခီရဲ့ သားဖြစ်သူကို မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ထဲက သီချင်းလေးကတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သွားနှင့်လေပြီးတဲ့ ပထမသားလေး Tristin Htut Khaung Kyi အတွက်ရေးပေးခဲ့တဲ့ “ရှိနေမယ်” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးထဲက တစ်ပိုဒ်ပါတဲ့ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေနားဆင်လို့ရအောင် သီချင်းလေးကိုပါ မျှဝေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။
Source – Zenn Kyi
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဇဏ္ခီနဲ႔ ခရစၥတီးနားခီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္ စုံတြဲေလးတစ္တြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာတဲ့မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ပရိသတ္ေတြအားက်ေနရတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ အႏုပညာစုံတြဲေလးဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။
မိသားစုဝင္ေတြအေပၚမွာအၿမဲတမ္းအေလးထားတဲ့ ဇဏ္ခီကေတာ့ ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ သားေလးရဲ႕ ေမြးေန႔အတြ က္ကိုလည္း ေမြးေန႔ ဆု မြန္ ေကာင္းေတြအခုလိုပဲေတာင္းေပးထားခဲ့ပါတယ္။”Happy 9th Birthday Noah! “ဘဝရဲ႕လွည့္ကြက္ေတြထဲ တခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့ ေပး ေလွ်ာက္ ရမွာပဲ။ ကိုယ္ေတြ႕မရွိရင္ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ခက္မယ္။
အမည္းစက္မစြန္းတဲ့လူမရွိဘူးသားရယ္ အေျခအေနေတြ ဟာ ေျပာ င္းလဲေနေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ဘာကိုမွ မလဲလို က္ပါနဲ႔..” ဂုဏ္ ျဒပ္ အရာဝတၱဳ စည္းစိမ္ဥစၥာ အာဏာအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရား ကိုလဲလိုက္ၿပီဆိုရင္ မင္းလူျဖစ္ရႉံးၿပီသားေရ “ဆိုၿပီး သူရဲ႕ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ထဲက စားသားေလးေတြနဲ႔အတူ သားျဖစ္သူ ကို ဆုံးမစကား ေလးေျပာကာ ေမြးေန႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးလည္း Noah ေလးအတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾက ပါဦးေနာ္။ဇစ္ခီရဲ႕ သားျဖစ္သူကို ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းေပးထားတဲ့ထဲက သီခ်င္းေလးကေတာ့ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ သြားႏွင့္ေလၿပီးတဲ့ ပထမသားေလး Tristin Htut Khaung Kyi အတြက္ေရးေပးခဲ့တဲ့ “ရွိေနမယ္” ဆိုတဲ့သီခ်င္းေ လးထဲက တစ္ပိုဒ္ပါတဲ့ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြနားဆင္လို႔ရေအာင္ သီခ်င္းေလးကိုပါ မွ်ေဝေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
တနေ့တရက်တည်းနဲ့ပြီးသွားမယ့်အရေးမဟုတ်ပေမယ့် ပြည်သူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ပေးကြဖို့ တောင်း ဆိုလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေ